Hapana dziva risina chura | Until 6 Oclock
Hapana dziva risina chura
July 10, 2017 Oden Bruce	Leave a comment
Ndinotya kuenda kumusha, wose anoendako anofa.” akadaro mukoma wangu. Akanga afonerwa nasabhuku kunzi auye kuzoorganiser zvemombe dzakanga dzasara mushure mekufa kwababa.
Ndainyatsoziva kuti airevei. Ndakakura ndichinzwa nyaya dzakawanda nezvekumusha. Mukoma wababa anonzi akaromba anogara ikoko kumusha. Kutaura kuno ava nechitoro ikoko kumusha. Kumusha vanhu vapera. Hapana anonyatsoziva kuti babamukuru huroyi vakahuwana sei.
Zvinofungidzirwa kuti mumazuva avo vachashanda kumamine vakambotsvaka mushonga nekuda chigaro mumaworkers committee. Ipapo vakapihwa huroyi nekusaziva. Ikozvino vatova senior, zvinonzi havachadzoreka, zvasanganawo nekuda kuchengetedza chigaro chavo chehucouncilor.
Patakaenda kurufu rwatete pakataurika zvakawanda. Babamukuru vanonzi havasi voga varikudya vamwe. Ambuya amai vanababa vanogara ikoko kumusha. Ambuya vakabatwa huroyi nemaporofita parufu rwemwana wababamudiki. Babamukuru vanonzi ndivo vaidiwa zvakanyanya naambuya saka vakaita hwekuyamwisirwa.
Ini zvinondinetsa, ambuya vangarera vana vavo kuti vazovadya vakura? Chete zvimwe zvinhu zvinonetsa kunzwisisa. Zvakafanana nokuti sei varoyi vachifarira nyama yomunhu kudarika yemombe yakangotekeshera kwose kwose? Ko ivo varoyi ava sei vasingade kushandisa ruzivo rwavo kusimudzira rudzi rwevatema? Ndakanzwa kuti vanobhururuka, vanwe vanoti vanopinda mudzimba dzakakiiwa. Zvinoshamisa!
Ichokwadi panofa munhu hapashaikwi muroyi, asi seiko tichingogara tichitsvaka makudo mugomo? Iwo maporofita atinovimba nawo zvikuru,seiko pasina musi waanouyawo kuzotiudza zvakanaka? Kungotiwo “musazvinetsa zvenyu, inguva yanga yakwana.”
Maporofita haasi ekwaMwari here aya? Ko sei kupfutidzira ruvengo pakati pedu kupfuura rudo? Iko kugarotiudza nezvejambwa ndiko kuti tinamate here? Ndingada hangu kunamata nechido kwete nekutya. Ndokusaka ndisingaende kumachechi avo ini. Handidi kupedza nguva yeupenyu ndichikwira makomo kuvhika chiga cherufu chagara chichazongouya.
Ndakabengenuka,ndokuti kumukoma wangu “Ko madii kuti sabhuku angotengesa musha pamwe nemombe dzacho akutumirei mari paEcocash? Musha tinoudii? Ngatigarei muno mudhorobha titange wedu hupenyu”
Takadzingwa nemabhunu munzvimbo nyoro tichinogariswa kurukangarabwe,ticharambirei tiriko muZimbabwe yakasununguka kudai.
“Asi apa wagaya mupfana” vakadaro mukoma. Ndakabuda panze ndikavasiya vachitotumira whatsapp yacho kunasabhuku.
Previous PostShona – The PeopleNext PostShona People and Their Spirituality